New York: R/Wasaare Xasan Cali Khayre oo ka hadlay Fadhiga 72aad ee Q.M. – Kasmo Newspaper
Updated - September 23, 2017 7:20 am GMT
London (Kasmo), Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa xalay fiidkii dambe, xilliga Geeska Afrika, ka jeediyay khudbad Xarunta Qarammada Midoobay ee New York, oo uu ka socdo Fadhigii 72aad ee UNGA (United Nations General Assembly).
Khayre wuxuu khudbaddiisa ku soo qaaday warbixin guud oo xaaladda dalka uu ka bixiyay, arrimaha Gobolka iyo Caalamka, sida argagixisada, horumarinta dhaqaalaha, isbaddelka Cimilada, iwm.
Khudbad dheer oo uu ku jeediyay afka Ingiriisiga wuxuu Beesha Caalamka ka codsaday sidii loo garab joogsan lahaa Soomaaliya, si ay u xagsato guulaha ilaa hadda ay gaartay, socodka dheer ee ay ugu jirto sidii ay mar kale cagaheeda ugu istaagi lahayd.
Fadhiga 72aad ee Golaha loo dhanyahay ee Q.M. oo furmay 19kii September 2017 waxaa lagu wadaa in uu soo xirmo 25ka Septembar, wuxuuna sannadkaan ku soo beegmay xilli adag oo dagaallo, abaaro iyo duufaanno ka soconayaan meelo badan oo dunida ka mid ah.